ဘဏ်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းမဟုတ်၊ Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 6, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
သိသာထင်ရှားသည့်အကောင့်များဖြစ်ပြီးနောက်တွစ်တာ၏နိဂုံးချုပ်ခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောဘလော့ဂ်များနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များပေါ်တွင်တိုက်ခိုက်မှုများရှိသည် တိုက်ခိုက်ခံရ။ အချို့သောဆိုဒ်များသည် hacker နှင့်တွစ်တာတို့ဖြင့်ပြောဆိုကြသည် နှင့် အထင်အမြင်သေးခြင်း (ကပ်ရောဂါတစ်ခု?!) ။ လူတွေကမ္ဘာပေါ်မှာဘာမှားနေတာလဲ
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ မက်ဆေ့ခ်ျအချို့ ကကျန်ရစ်ခဲ့သည် ဟက်ကာ အတော်လေးရယ်စရာဖြစ်။ ဒါကငါကဟက်ကာကိုတာ ၀ န်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ သူကတွစ်တာစီမံခန့်ခွဲသူကိုအဘိဓာန်တိုက်ခိုက်မှုပြုခဲ့သော scripts များပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ သူ၏တိုက်ခိုက်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်သူသည် log in ၀ င်သည်။ သူဝင်ရောက်ပြီးနောက်အခြား account password များကိုပြန်လည်သတ်မှတ်သည်။ သူကစကားဝှက်တွေကိုပြောင်းပြီးတဲ့နောက်သူတို့အကောင့်ထဲကို log in လုပ်လိုက်တယ်။ ရှိပါတယ် Wired မှာ hack မှုအသေးစိတ်အပြည့်အစုံ.
Twitter သည်သင်၏အကြွေးဝယ်ကဒ်အချက်အလက်ကိုသိမ်းဆည်းထားသော e-commerce အစီအစဉ်မဟုတ်ပါ။ Twitter မှာသင့်ရဲ့လူမှုဖူလုံရေးအချက်အလက်မရှိပါ။ Twitter သည် universal authentication package တစ်ခုအဖြစ်ဟန်ဆောင်။ မကြိုးစားပါ။ တွစ်တာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလိုဖြစ်ဖို့ဘယ်တော့မှမ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသူတို့ချဉ်းကပ်ပုံတွင်ချို့ယွင်းမှုရှိနိုင်သော်လည်းထိုနေရာသို့တစ်စုံတစ်ယောက်က၎င်းတို့အား hack ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်သူတို့၏အမှားမဟုတ်သေးပါ။
တွစ်တာဟာဘဏ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဟက်ကာသည်ဓားပြဖြစ်သည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဘဏ်ဓားပြသည်လုံခြုံရေး၌အားနည်းချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ဆုံးတွင်လုံခြုံစိတ်ချရသောအက်ကွဲသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ဘဏ်ကိုအပြစ်တင်ကြသလော။ မဟုတ်ပါ၊
တွစ်တာကတုံ့ပြန်လိုက်ပြီ။ လုံခြုံရေးဖောက်ဖျက်မှုအကြောင်းဟက်ကာက Twitter ကိုအကြောင်းကြားပြီးသူတို့မပြင်လိုက်ရင်ငါကသူတို့ကိုတာ ၀ န်ယူမယ်။ ဟက္ကာကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။
Tags: titter စကားဝှက်တွစ်တာtwitter hack
မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်
ဇန်နဝါရီ 7, 2009 မှာ 9: 45 AM
“ ဘဏ်ဓားပြသည်လုံခြုံရေး၌အားနည်းချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ဆုံးတွင်လုံခြုံစိတ်ချရသောအက်ကွဲသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ဘဏ်ကိုအပြစ်တင်ကြသလား။ မဟုတ်ပါ၊
ငါတို့! ကျွန်တော်ဘဏ်ဘဏ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ ငါ့ကိုယုံပါ, ဘဏ်လိမ့်မယ် အကြွင်းမဲ့ လုံခြုံရေးအားနည်းချက်များအတွက်အပြစ်တင်ရ။ မီဒီယာကရောဖောက်သည်တွေပါ။
တွစ်တာတွင်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။ ဟက်ကာများကြောင့်၎င်း၏နိဂုံးသည်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်မည်လော။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သဘောပေါက်ခြင်း သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ဆိုက်သည်အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုဆိုပါကသူတို့၏စနစ်ကပိုမိုလုံခြုံသည်ဟုဆိုသောအခြား SocNet ဆိုဒ်နှင့်၎င်းကိုဘေးဖယ်ထားလိမ့်မည်။ ယခုအချိန်မဟုတ်သေးပါ၊ သို့သော်အချိန်နှင့်ဟက်ကာများ၏ဇွဲကောင်းကောင်း၊ hack ရန်တို့ကတွစ်တာကိုဒူးထောက်လိုက်မည်။
ဇန်နဝါရီ 8, 2009 မှာ 12: 45 AM
မင်းမှာအမှတ်ကောင်းတစ်ခုရှိတယ်။ ငါသဘောတူရန်ကိုမုန်း! 🙂